आँखा छल्दैमा, पाइँदैन सुख… – दैनिक नेपाल न्युज
आँखा छल्दैमा, पाइँदैन सुख…
“हेल्लो ! राजकुमार जी, बोल्नुभयो ?” एक प्रहरीको फोन आयो । “हजुर बोल्दै छु”, जवाफ फर्कियो । म महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट, तपाईं एक पटक यहाँ आएर कोठा नम्बर १० मा भेट्नुहोला ।” ट्राफिक प्रहरीको फोनले राजकुमार (नाम परिवर्तन) झसङ्ग हुनुभयो । कुनै सवारीलाई ठक्कर दिएको छैन । कुनै प्रहरीसँग सिफारिश छैन । कुनै ट्राफिकलाई चिनेको पनि छैन, तर एक्कासी भेट्न आउनुस् भनेर फोन आउँछ । उहाँ अच्चममा पर्नुभयो । “आ होइन होला ! कसैले झुक्याउन फोन ग¥या होला”, राजकुमारको मनमा यस्तैयस्तै विभिन्न विचार खेल्न थाल्यो ।
विषय बुझ्ने उहाँको छटपटी रोकिएन । साथीभाइलाई फोन गरेर सोध्नुभयो । आफूलाई कल आएको नम्बरबारे चिनजानका प्रहरीलाई सोध्नुभयो । त्यसपछि बल्ल ट्राफिक प्रहरीबाटै फोन आएको उहाँलाई पक्का भयो । फोन चाहिँ किन आयो त ? बुझ्नका लागि काम छाडेर हस्याङ्फस्याङ गर्दै उहाँ महाशाखा पुग्नुभयो । अभिलेख हेरेर प्रहरीले भने, “ल तपाईंले लेन मिच्नुभएको छ”, “मैले कसरी लेन मिच्नु, घरमा काम गरिरहेको मान्छे”, उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो । “एक्कै छिन् पक्नुस् है”, सिसी टिभीको श्रव्यदृष्य खोल्दै खोजतलास तथा सिसीटिभी कारवाही शाखाका एक जना प्रहरीले भन्नुभयो ।
अघिल्लो दिन ठीक ६ बजेर १५ मिनेट १० सेकेण्डमा माइतीघरमा लेन मिचेको श्रव्यदृष्यबाट प्रष्ट देखियो । त्यसपछि उहाँ मलिन अनुहारमा रशिद लिएर ट्राफिक कक्षा लिनतिर लाग्नुभयो । यो प्रतिनिधि घटना हो । महाशाखामा अहिले दैनिक सयौँ यस्ता घटना आइरहेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट पठाइएको अभिलेख केलाउँदैमा सिसीटिभी शाखाका प्रहरीलाई भ्याइनभ्याइ छ । शुक्रबार उक्त शाखामा यसैगरी बोलाइएका मानिसको भीड थियो । सामान हराएर खोजतलासका लागि आएकासमेत थपिँदा दुई प्रहरीलाई काममा दबाब परेको देखिन्थ्यो । जनशक्ति र प्रविधिको अभावका बीच नै प्रहरीले यसरी प्रविधिमार्फत ट्राफिक नियम उल्लङ्घनविरुद्ध कारवाही अभियान तीव्र पारेको छ ।
ब्रेथ एनालाइजरको प्रयोग गरेर मापसे नियन्त्रण अभियान जारी छ । गोब्रो क्यामरा, सर्भिलेन्स भेइकलका माध्यामबाट नम्बरप्लेटको आधारमा पहिचान गरी कारवाही गर्ने प्रक्रियासमेत चलिरहेको प्रमुख पन्तले बताउनुभयो । प्रहरीले फोन गरेर बोलाएकै आधारमा जेठ महीनामा मात्रै १५० लाई कारवाही गरेको छ । सिसी क्यामराको आधारमा तत्कालै पिछा गर्दा स्थलगतरुपमै भेटेर कारवाही गरेको सङ्ख्या ८५६ रहेको छ । सर्भिलेन्स भेइकलमा प्रयोग गरेको सिसी क्यामराबाट ३९ कारवाही परेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सिसी क्यामराबाट प्राप्त दृश्यको आधारमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने कूल सात हजार १०६ कारवाही परिसकेका छन् ।
महाशाखा प्रमुख पन्तका अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनमा हरेक व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक, सवारी र ट्राफिक नियमका बारेमा व्यक्ति कमै जानकर छन् । सचेतनाको अभावमा समस्या बढ्दो छ । “सडकमा कसरी हिँड्ने, कहाँ र कसरी पार्क गर्ने, कसरी दायाँ¬बायाँ जाने, व्यक्ति धेरैलाई थाहै छैन, अलीअली जानेकाहरु छल्न खोज्छन्, अझै ठूलो समस्या भनेको हरेक मान्छे सडकबाटै पार गर्छन्, जसले दुर्घटनालाई निम्त्याइरहेको छ”, पन्तले थप्नुभयो । अहिले ट्राफिक प्रहरीले ओभरहेड ब्रिज बनाउन र सिग्नल बनाइदिन सडक विभागलाई लेखेर पठाएको छ । साँच्चै नै काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने नै हो भने ठूला सवारी साधन भित्र्याएर सानालाई मुख्य सडकमा रोक्नुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक किरण बज्राचार्य सडकमा ट्राफिक नदेखेपछि जथाभावी गाडी दौडाउँदा दुर्घटनाको जोखिम भएपछि सिसीटिभीको श्रव्यदृश्यका आधारमा कारवाही थालिएको बताउनुहुन्छ । “ट्राफिक नभएका बेलामा बढी लापरवाही भो, त्यसैले हामीले अहिले काठमाडौँमा टेक्नोलोजी प्रयोगलाई बढाएका छौँ, योक्रम काठमाडौँसहित भक्तपुर र ललितपुरमा पनि चल्दै छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भ्रष्टाचार देश विकासको लागि प्रमुख बाधकः नेता पौडेल